सरकारसँग सहमतिपछि डा. केसीले तोडे अनशन,सफाइ कर्मचारीले पिलाए जुस - Lekhapadhi देश : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
सरकारसँग सहमतिपछि डा. केसीले तोडे अनशन,सफाइ कर्मचारीले पिलाए जुस
लेखक : लेखापढी २५ आश्विन २०७७, आईतवार ११:३९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच गए राती सहमति भएपछि डा.केसीले आफ्नो २८ दिनलामो अनशन तोड्नु भएको छ ।
उहाँले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सफाइ कर्मचारी विकास नेपालीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोड्नु भएको हो ।
सरकारद्वारा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा गठित सकारी वार्ता टोली र डा.केसीका प्रतिनिधिबीच गए राती भएको आठ बुँदै सहमति पछि आइतबारबाट डा.केसीले अनशन तोडनु भएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकारमा डा. केसीबीच २०७५ साउन १०लाई पनि राख्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।